Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee cadawga lagu naafeeyay
Posted by ONA Admin	/ May 12, 2014
Wararka nagasoogaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixiyay dagaalo xoogan oo lagu qaaday ciidamada gumaysiga Itoobiya dagaaladan oo ubadnaa jidgooyooyin iyo dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ayaan intooda badan wali lahelin faahfaahintooda waxayna u dhaceen dagaalada aan helnay warbixintooda sidan.
21/4/14 Saarka oo dagmada Galaalshe ee Gobolka Nogob katirsan weerar gaadma ah oo ay CWXO kuqaadeen waxay ku dileen 1 askari oo ciidanka cadawga ah.
23/4/14 Marsin oo dagmada Galaalshe katirsan dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya kudhax maray waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
25/4/14 Fariiqyada oo Dagmada Baabili ee Gobolka Faafan katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh.
25/4/14 Dulqorax oo Dagmada Shaygoosh ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan.
26/4/14 Labi’oon oo Dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga Itoobiya loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa wali lahelin.
28/4/14 Sanxaskule oo dagmada Dhagaxmadow katirsan weerar mir ah oo ay CWXO kuqaadeen waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aad u balaadhan oo aan faahfaahintiisa lahelin.
28/4/14 shabeelay oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga loogu gaystay khasaare aan lasoo faahfaahinin.
30/4/14 Warxirsi oo Dagmada Shaygoosh ee Gobolka Qoraxay dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
2/5/14 Dagmada Dhagaxmadow weerar mir ah oo ay CWXO kuqaadeen xero ciidan oo uu hadawgu halkaas kuleeyaya waxay kugaadhsiiyeen khasaare naf iyo maalba leh.
19/4/14 Dhurdekoruye oo dagmada Danood ee Gobolka Doolo katirsan dagaal kudhex maray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya waxaa ciidanka doolka ah lagaga dilay 5 askari tiro aan laxaqiijinin na waa lagaga dhaawacay.
24/4/14 Goorashilin oo Dagmada Baabili ee Gobolka Faafan katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
27/4/14 Gurijaadleh oo dagmada Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada daalunka ah ee Itoobiya lagaga dilay 6 askari 5 kalana waa lagaga dhawacay.
30/4/14 Qoriile oo Danood katirsan kamiin ay kaxidheen CWXO waxay kugubeen 1 baabuur oo kuwa cadawga ah waxaana kubasbeelay ciidan aad ubadan oo aan tiro sugan laga haynin.
1/5/14 Duleedka Dagmada Wardheer ee xarunta Gobolka Doollo kamiin ay kaxidheen cutub katirsan CWXO waxaa soo galay ciidan oo cadawgu leeyahay dagaalkan oo aad looga gacansareeyay ciidamada gumaysiga waxaa lagaga dilay 11 askari 19 kalana waa lagaga dhaawacay.
1/5/14 Dagmada Shilaabo ee Gobolka Qoraxay dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 5 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay. Isla 1/5/14 Shilaabo dagaal kale oo CWXO iyo kuwa cadawga kudhexmaray waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 7 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
3/5/14 Dagmada Awaare ee Gobolka Jarar dagaal kadhacay waxaa waxaa lagu dilay sargaal ciidanka Hawaarinta katirsan oo lagu magacaabo Maxamad Aadan Dhagoole (maaradoone).
4/5/14 Dhagaxtuur oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan.
4/5/14 Gosolalay oo dagmada Dhagaxbuur udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan lafaahfaahinin.
5/5/14 Lehelow oo Wardheer katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka Wayaanaha lagaga dilay 2 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/5/14 Lehelow oo Wardheer katirsan weerar mar labaad ay CWXO kuqaadeen ciidamada cadawga waxay kaga dileen 1 askari 2 kalana way kudhaawaceen.
5/5/14 Xatu oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
6/5/14 Calaadh oo Dagmada Wardheer katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 5 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
7/5/14 Qoriile oo Danood katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 8 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
8/5/14 Banbaas oo Baabili katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/5/14 Aqalaalayowga oo Wardheer katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay inta lahubsaday 1 askari 2 kalana waa laga dhaawacay.
9/5/14 Yucub oo Dagmada Wardheer katirsan dagaal xoogan oo kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya looogu gaystay khasaare balaadhan oo aan faahfaahintiisa wali lahelin.
Sikastaba ha ahaatee Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa baryahan wada dagaalo aad ubadan oo ay la beegsanayaan fadhiisimada ay ciidamada gumaysigu kuleeyihiin ciida daahirka ah ee Ogadenia waxaana lasoo sheegayaa dhawbaaxooyin xoogbadan oo kudhacay ciidamada cadawga.